चितवनका अस्पतालमा जटिल प्रकृतिको कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै | Samabesi Khabar
चितवनका अस्पतालमा जटिल प्रकृतिको कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै
चितवनका अस्पतालमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामी बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा अस्पतालमा सिकिस्त बिरामी पनि बढेका हुन् ।
भरतपुर अस्पतालमा हाल ४५ जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामी भर्ना भएका छन् । अस्पतालका फिजिसिएन डा. प्रमोद पौडेलका अनुसार अक्सिजन चाहिने, ज्वरो आएका, श्वास फेर्न गाह्रो भएका बिरामी भर्ना हुने गरेका छन् । ४५ जना बिरामीमध्ये १० जना आइसियुमा, २५ जना एचडीयु तथा एक जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् भने दुई जना हाईफलो नजल क्यानुला वार्डमा भर्ना भएका पौडेलले बताए ।
‘कोभिडको सङ्क्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । सिकिस्त बिरामी धेरै नै देखिएका छन्’ डा। पौडेलले भने, ‘सिकिस्त नभएसम्म होम आइसोलेसन बसे पनि श्वास फेर्न गाह्रो हुँदा अक्सिजन नै चाहिने बिरामी आएर भर्ना भएका छन् ।’ भरतपुर अस्पतालले कोरोनाको लागि ११० शैय्या छुट्याएको छ । जसमध्ये १०/१० शैय्याको भेन्टिलेटर र आइसियु, २५ शैय्याको एचडीयु तथा बाँकी सामान्य वार्ड रहेका छन् ।
जटिल प्रकृतिको लक्षण देखा परेपछि मात्र बिरामी आउने भएकाले आइसियु र एचडीयु खाली नरहेको डा। पौडेल बताउँछन् । ‘धेरैजसो बिरामी आइसियु र एचडीयुमा राख्नुपर्ने भएकाले भरिएको छ’ उनले भने । कोरोना बिरामीको उपचार व्यवस्थापनको लागि शैय्याहरु थप्ने, अक्सिजन प्लान्ट मर्मत, भेन्टिलेटर थप्ने जस्ता काम अगाडि बढाएको डा। पौडेलले बनाए ।
चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्साल अस्पतालमा १८ जना कोरोना सङ्क्रमित भर्ना भएको र अधिकांश बिरामीको अवस्था सिकिस्त रहेको बताउँछन् । बिरामीले सिकिस्त हुने बेलासम्म घरमै बस्ने कोरोनाको परीक्षण समयमै नगर्दा समस्या भएको डा। लम्सालको भनाइ छ । ‘अन्तिम अवस्थामा अक्सिजन र भेन्टिलेटर चाहियो भन्दै आउनुहुन्छ, पोजेटिभ हो कि नेगेटिभ थाहा पाउन १२ देखि २४ घण्टा लाग्छ । बिरामीलाई कुन वार्डमा राखेर उपचार गर्ने भन्ने नै अलमल हुन्छ’ उनले भने, ‘लक्षण देखिनेबित्तिकै पिसीआर गरेमा अरुलाई सर्न कम र उपचारमा पनि सहज हुन्थ्यो ।’
अहिले चितवन मेडिकल कलेजमा दैनिक १५० देखि २०० जनाको पिसीआर परीक्षण हुने गरेको छ । पिसीआर गरेको आधामा कोरोना सङ्क्रमण देखिने गरेको डा.aw लम्साल बताउँछन् । चितवन मेडिकल कलेजले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको लागि ५२ शैय्या छुट्याएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार हालसम्म चितवनमा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित ३९२ पुगेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा चितवनमा ६८ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । चितवनमा हालसम्म कोरोनाबाट ११६ जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिपकबाबु तिवारीले जानकारी दिए ।